Lahti vs Jyvaskyla - ဖင်လန် Veikkausliiga | ဘောလုံးခန့်မှန်း | လောင်းကစားအကြံပေးချက်များ
+7/ 9584-983-763iဎfအဆိုပါ@s ကိုoccerbetshအဆိုပါot.က coမီတာ
ပွဲစဉ်ရက်စွဲ:7စက်တင်ဘာ 2017 | Posted:6စက်တင်ဘာ 14:53 2017 GMT +2| သိမှတ်ဖွယ်ကြည့်ရှုအားပေး 1158 ကြိမ်.
Lahti vs Jyvaskyla – ဖင်လန် Veikkausliiga
Lahti vs Jyvaskyla – ဖင်လန် Veikkausliiga, JJK Jyvaskyla afte 24 payed ဂိမ်းနှင့်အတူစားပွဲပေါ် 12th အနေအထားပေါ်မှာ 15 မှတ်. သူတို့မှာရှိတယ်3အောင်မြင်6ဆွဲယူခြင်းနှင့် 15 ဆုံးရှုံးမှု, နှင့်ရည်မှန်းချက်ခြားနားချက်နှင့်အတူ 22-50 (-28). သူတို့ losed အဖြစ်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်များတွင်သူတို့တစ်တွေပွိုင့်မယ့်ဝင်ငွေမှစီမံခန့်ခွဲမရ 4-0 SJK ထံမှ, တစ်ခုကွာသည်မြေပေါ်မှာပွဲပေါ်. အိမ်စံချိန်အကြောင်း, သူတို့ကစားခဲ့ကြ 11 အိမ်မှာဂိမ်းများနှင့်သူတို့နှင့်အတူရှိ2ကိုအနိုင်ပေး2ဆွဲခြင်းနှင့်7ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ရည်မှန်းချက်ကွာခြားချက်ကြပါပြီ 10-26 (-16). ငါသူတို့ကဒီဂိမ်းထဲမှာပင်တစ်ဦးပွိုင့်ယူစရာအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိတယ်ထင်.
ခန့်မှန်း lineup Jyvaskyla : ဂိုးသမား: Pyharanta ကာကွယ်သူများအတွက်: အဆိုပါအလက်ဇန်းဒါးကျောင်း, Lahitie, Nieminen, Vielma ကာကွယ်ရေးကွင်းလယ်လူ: Leppanen, Poutlainen ကွင်းလယ်လူတိုက်ခိုက်ခြင်း: Manninen, Petrescu, Kari Forward: Etock.
အခြားဘက်ခြမ်းတွင်ကျွန်တော် Lahti 2nd ထားရှိပါပြီ. ပြီးနောက်ကစား 24 မီးခြစ် Lahti နှင့်အတူ 2nd အနေအထားမှာဖြစ်ပါတယ် 38 မှတ်, သူတို့အနိုင်ရပါပြီ9ကြိမ်, ရေးဆွဲ 11 ကြိမ်နှင့်ပျောက်ဆုံး 12 ကြိမ်, သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ် 30-17 (+13). Lahti နောက်ဆုံးဂိမ်း (အိမ်မှာ) PS Kemi ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြီးမားသောအံ့အားသင့်စရာအဖြစ်သူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရ 0-1. ဂိမ်းထဲမှာအိမ်ကနေ Lahti ရှိသည်ထံမှ4ကိုအနိုင်ပေး6ဆွဲယူခြင်းနှင့်2ဆုံးရှုံးမှု, ရည်မှန်းချက်ခြားနားချက်နှင့်အတူ 14-9 (+5). ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုယူရိုပါလိဂ်လိဂ်ဇုန်ချွတ် play ထဲကသူတို့ကိုယူပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုအဆိုအရဒီဂိမ်းညာဘက်အနိုင်ရလမ်းပေါ်ပြန်လာရန် lahti အဘို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုသူတို့လိဂ်အတွက်နောက်ဆုံးအဖွဲ့ကဆန့်ကျင်ကစားနေကြသည်ဟူသောအချက်ကိုသတိပြုပါသင့်တယ်.
ခန့်မှန်း lineup Lahti : ဂိုးသမား: Vasyutin ကာကွယ်သူများအတွက်: Hauhia, Jovanovic, KÄRKKÄINEN, အချိန်ကွင်းလယ်လူ: Helmke, ချုပ်ထား, Paananen Forward: Hostikka, Simonovski, Stenio.
– Lahti ပြီးခဲ့သည့်အတွက် unbeaten များမှာ 10 JJK နှင့်အတူအစည်းအဝေးများ,6အနိုင်ပေးနှင့်4ဆှဲ.
– နောက်ဆုံး5အစည်းအဝေးများနှစ်ဦးစလုံးအသင်းများကိုသွင်းယူမြင်၏4ကျော်မှတ်ပုံတင်ထားသူတွေရဲ့ 2.5 ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်.
သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်သူတို့တစ်တွေစီမံခန့်ခွဲကစား 3-1 ပွဲကစားကာကွာမြေပြင်ပေါ်တွင် Lahti များအတွက်အနိုင်ရ 01/07/2017.
အဆုံးမှာကိုယ်ကဒီ Lahti လုံခြုံရေးအတွက်အဘို့ကြီးသောအခွင့်အလမ်းကြောင်းပြောနိုင်3ပွိုင့်ရဲ့နောက်ဆုံး positive အဖွဲ့ကျော်လိဂ်အတွက်. ငါဒီဂိမ်းထဲမှာ Lahti ထက်မကအခြားဆုရသူကိုမြင်ရ. ငါ Lahti အနည်းဆုံးဂိုးသွင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်2ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဒီတော့ဒီဂိမ်းအဘို့အကြှနျုပျ၏အစွန်အဖျား Lahti ကျော်ဖြစ်ပါသည် 1.5 goas. ပိုမိုမြင့်မားသောအလေးသာလိုခငျြသောသူတို့အဘို့နှင့်သူတို့၏နောက်ဆုံး H-2-H ကိုဂိမ်းအညီ Lahti ကြိုးစားနိုင် & ပတ်ပတ်လည်လေးသာမှုနှင့်အတူ BTTS 3.50 – လောင်းကစား 365.